Ụlọ ụlọ ọrụ a na - akpọsa ígwè a na - agbawanye ụgbọ mmiri nke na - egbochi n’ebe e si n’ebe a na - egbochi n’ebe a na - akpọsa ígwè - China Boegger
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Security > Ụdị:>Ịgba ígwè a na - agbawanye n’ọrọ
Iji ígwè e ji nche ígwè a na - agbawanye na - adịkwu mkpa n’ihe e ji emepụta na ndụ anyị mgbe a na - emepụta nkà na ụzụ nke oge a. N’otu akụkụ, ígwè nche pụrụ ichebe ngwá ọrụ ndị na - arụ ọrụ nke ọma; n’aka nke ọzọ, ọ pụkwara ichebe nchebe nke ndị ọrụ ahụ. Nwakwa e ji akụkụ nke ihe ndị na - egosi na - adịgide adịgide, Ndị nche ígwè a na - agbawanye ụdị ngwá ọrụ nile dị ka ígwè, ígwè eletrik, Ịgba ígwè na ígwè egwú n’ihe ụlọ ọrụ ndị na - emepụta na n’ebe a na - emepụta ihe.
Akụkụ ndị a na - eche ígwè e ji nche n’agbụ
Ike dị elu, ihe a na - akwụsị n’ahụ́.
L Aghara aghara.
Mmadụ na - echebe nchebe ndị ọrụ.
Ana m na - egbochi abanye n’uzuzu, ebe mmiri na ihe ndị ọzọ dị nkọ.
L Durable na oge ndụ karị.
Ihe omume nke ígwè e ji nche ígwè a na - agbawanya
A na - eji ụdị ụdị ngwa ngwa ngwa ngwa dị iche iche dị ka ụdị ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa dị ka CNC, ígwè, Ụlọ ọrụ a na - eletrik, ígwè e ji akpụ na ígwè egwú n’ụlọ ọrụ ndị a na - emepụta n’ebe ndị e ji emepụta ihe.
Usoro iheomume nchekwayingwe abawanye
Mwagụ̀ expanded metal machine guarding, expanded mesh, expanded metal screen,
Olee ụkpụrụ ndị a na - enwe n’ahụ́?
Gịnị bụ ụkpụrụ ndị aKùdara gwìwụrụ àwà?Mkpirikpi (SWM): oge nke dayamond diagonal dị mkpirikpi site n'ebe n'ebe ahụ ruo n'ebe kọmputa.Ogologo pụta (LWM): ogologo n’oge dayamond diagonal nke ogologo si...
Ihe ndị a na - eme ka a gbawanye
Ụlọ ahụ a gbawanyie bụ ụdị ọkụ n'igwe nke nwere ike ịgbaza ihe ndị ahụ ruo ogologo mbụ nke ugboro abụọ ruo iri. A na - akpọkwa ya ụgbụ ígwè na - enye ígwè, ụgbụ ụgbụ a na - agbanwe ụgbụ akpụ, na - agb...
Olee ụkpụrụ ndị a na - agbawanye n’ahụ́?
Ọ́fùKùdara gwìwụrụ àwàỤkpụrụ ọ̀ dị?Mkpirikpi (SWM): oge nke dayamond diagonal dị mkpirikpi site n'ebe n'ebe ahụ ruo n'ebe kọmputa.Ogologo pụta (LWM): ogologo n’oge dayamond diagonal nke ogologo site n...
A pụrụ ikewa n’akwụkwọ ndị a Na - agbawanye?
Ụdị bawanhara Ọ bụ ụdị egwu ígwè nke a pụrụ ikekewa n'aka ekpe na nri na nri. Ụlọ ígwè abụọ a abụghị otu ihe. Nkà a bụ obodo nke wire n’akwụkwọ, bụ́ nke dị ala karịa akụ̀ nke ihe. Ndị a kpọmeKùdara gw...
Ihe atụ nke iji nweta usoro ọgwụ a gbawanya
Ihe atụ nke ihe omume nke aKùdara gwìwụrụ àwàA na - arịaỤgbụ a na - agbasa n’oge mbụ bụ ihe e ji ígwè akụkụ a na - esi n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ iji mee ihe dịgasị iche n’elu ụgbọ mmiri e ji ígwè.Ọgwụgwọ a...
Ihe ndị a na - enwe n’ihe e nwere n’ihe ndị a na - enwe n’ihe ndị a na - akwụsị n’akwụkwọ
Ogologo oge gara aga,Inyogo metal gbawanyeA na - ejikarị eji ụgbụ na - echebe, oggbe na mkpụrụ, dị ka ogbi ndị dị n’obere basketball anyị, n’ebe anyị na - elekọta ihe n’ubi na n’ubi mgbe anyị nọ n’ụlọ...
Ịchọpụta nke ịchọpụta ihe ndị a na - agbawanya
Mmadụ na ịma mma n’ahaInyogo metal gbawanyePụrụ ịgbanwe n’ụzọ dị irè nke ìhè na okpomọkụ, ka mgbidi dị n’èzí wee nwee ike ịna - enwe mmiri dị irè ma gbochie ikuku na - ekpo ọkụ ịchịkọta ruo ogologo og...
Nkà na ụzụ iji nweta ọgwụgwọ dị n’elu ụkwụ
Ịgba ígwè a na - agbawanye n’ọrọIhe nkọwa na usoro: a na - eji uwe a na - akụkụ akụkụ karbón site n’ịbụ n’ịbụ, ịkụ n’ụzọ kpọmkwem, ịgwọ n’elu elu na usoro ndị ọzọ a na - emezuru ụkpụrụ: dị ka ihe ndị ...